DEG DEG: Al Shabaab oo gacanta ku dhigtay Diyaarad kusoo dhacday deegaan ay maamulaan | Allbanaadir
DEG DEG: Al Shabaab oo gacanta ku dhigtay Diyaarad kusoo dhacday deegaan ay maamulaan
Diyaarad nuuca aan duuliyaha laheyn oo howlo basaasnimo ah ka waday deegaano ay maamulaan Ururka Al Shabaab ayaa ku soo dhacday deegaan katirsan gobolka Shabeelaha Hoose.
Sida aan wararka ku helnay diyaaradan ayaa kusoo dhacday beer kutaala Duleedka deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeelaha Hoose, waxaana dadka deegaanka sheegeen in diyaaradan oo aheyd kuwa yar yar ku xirnaayeen Kaamirooyin iyo qalab kale.
Dagaalyahano katirsan Al Shabaab ayaa la wareegay bur burka diyaaradan qeybo kamid ah, waxaana dadka deegaanka ku warameen in Al Shabaab hore u qaateen kaamirooyin iyo qalab kale oo ku xirnaa Diyaaradan soo dhacdaday.
Diyaaradan nuuca aan Duuliyaha laheyn ee howlgalka basaasnimo ku jirtay ayaa loo maleenayaa in ay leedahay dowlada Mareykanka oo marar badan duqeymo ka fulisay deegaano katirsan gobolka Shabeelaha Hoose.
Al Shabaab ayaa marar badan gacanta ku dhigtay diyaarado nuuca aan duuliyaha laheyn oo kusoo dhacay deegaano ay dalka ka maamulaan, waxaana diyaaradahan basaasaan goobaha ay inta badan ku xoogan yihiin Al Shabaab.